Abavelisi bakaLoliwe baseTshayina kunye nabaBoneleli-i-Huanyu Sanitary Ware
Ikhaya > Iimveliso > Isiporo seshawa
Isiporo seshawa Abavelisi
I-Ningbo Huanyu Sanitary Ware Limited, umenzi ophezulu ochwephesha kunye nomthengisi ngaphandle e-China kwaye ube kumgca weplastiki ngaphezu kweminyaka engama-20 kunye neshishini lempahla yococeko iminyaka engaphezu kwe-10, Kwakhona. siye saqinisekisa ngenkqubo yokulawula umgangatho ye-ISO 9002S ekuqaleni kuka-1999. sivelisa zonke iimveliso zayo eTshayina. Iimveliso zethu imigca yempahla yococeko ibandakanya oku kulandelayo: Intloko yeshawa, ishawa yesandla, isiporo seshawa, izibambi zeshawa, ithumbu leshawa, iseti yeshawa, isibiyeli sodonga lweshawa, izincedisi zeshawa, iShower Bidet, Ishawa & izincedisi zegumbi lokuhlambela ngokunjalo norhwebo nezinye iimveliso zococeko kwi Yenziwe kwiWebhusayithi yaseTshayina.
Umzila weshawa yimveliso elula yokulungelelanisa ukuphakama kweshawa. Xa kuthelekiswa neseti yeshawari, ixabisa kakhulu. Ifanelekile kwizindlu ezirentwayo. Sinezimbo ezingaphezulu kwama-30 onokuthi ukhethe kuzo.
Ixhotyiswe ngomatshini omtsha wokubumba inaliti elawulwa yikhompyutha; inkqubo yovavanyo oluphezulu kunye nomatshini olungileyo wokupakisha i-blister, sinokukubonelela ngeentonga zeshawa ezikumgangatho ophezulu ngokweemfuno zakho. Ngokuphathelele ukupakishwa, silungile kwi-blister ukupakisha kunye neebhokisi zemibala. Ewe kunjalo, ukuba abathengi baneemfuno, sinokubonelela ngokupakishwa okukhethekileyo. Njengomvelisi, sineziko lethu lokubumba, kwaye iinjineli ezinamava zihlala zilungele ukwenza naluphi na uhlengahlengiso kunye nokuphuculwa ngokukhawuleza ngokweemfuno zakho.
Ikholamu yokuhlambela ye-Chrome ejikelezileyo yeshawari yenziwe ngentonga yensimbi engenasici, izibiyeli ezimbini zodonga, i-bracket bracket, kunye nebhokisi yesepha. Ixesha lethu lewaranti yiminyaka emibini. Ubomi benkonzo bungaphezulu kweminyaka emi-5. Ngexesha elifanayo, ungayithenga ngentloko yethu yokuhlamba kunye ne-hose yeshawari.
Thenga iimveliso kumzi-mveliso wethu obizwa ngokuba yi-Huanyu Sanitary Ware yenye yezona zinto ziphambili Isiporo seshawa zabavelisi kunye nababoneleli eTshayina. Umgangatho wethu oPhezulu Isiporo seshawa uthandwa ngabantu abafuna ukufumana izinto zorhwebo eziphantsi. Sinemveliso ezininzi kakhulu zokubonelela ngenkonzo yehoseyile. Unokuqiniseka ukuba uthenge ixabiso eliphantsi kumzi-mveliso wethu.